"Mifohaza ianao izay matory, ary mitsangàna amin’ny maty, dia hampahazava anao Kristy. Efesiana 5:14 Izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin’ny olona rehetra koa: Miambena." Marka 13:37
Raha mamoha olona matory isika, dia indraindray manao soa lehibe aminy, ary manavotra ny ainy mihitsy aza. Ilay olona matory mantsy dia tsy mahatsiaro izay manjo azy, amin’io fotoana io. Mety hisy mpangalatra miditra ao aminy, kanefa tsy reny; mety hisy afo mandoro ny tranony ka manakana ny lalana rehetra tokony hivoahana, kanefa tsy tsapany. Firifiry moa ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny torimason’ny mpamily efa valaka!
Ao amin’ny Tenin’Andriamanitra, ny torimaso dia kisarisarin’ny tsy fahatsiarovan-tenan’ny olombelona, momba ny toetrany ara-panahy. Rehefa nomena fanafody fampitoniana ny marary, dia mety tsy hahatsapa fanaintainana mihitsy, ka tsy hieritreritra ny aretiny intsony. Toy izany koa, ny olona dia mety mizatra miaina toa rendremana momba ny ankehitriny, mety manonofinofy momba ny hoavy, ary mety mody tsy mahita ireo olana lehibe eo amin’ny fiainana, dia ny ota, ny fahafatesana, ny any ankoatra.
Misy olona mandeha eto amin’izao fiainana izao, toy ny matory mitsangana eny amoron-tevana. Adidintsika ny miantsoantso aminy hoe: Mifohaza ianao, fa mananontanona anao ny fahafatesana; hafa tanteraka noho izay nofinofisinao ny zava-misy. Raha tsy izao ianao no mihiratra, dia ho tafalatsaka tampoka ao amin’ny mandrakizay, ka amin’izay vao hifoha… saingy tara loatra! Aza mangataka andro, mitodiha amin’i Jesosy.
Ary isika mpino, aoka hiambina mba tsy hatory. Izao ankehitriny izao isika no afaka manome voninahitra sy manompo ny Tompontsika. “Sambatra ny mpanompo izay ho hitan’ny tompony miambina, raha avy izy” (Lioka 12:37).